Namuhla, noma yimuphi owesifazane angabonakala njengonkulunkulukazi wobuhle. Kungaba isifiso sokuhlale unakekele ukubukeka kwakho. Ngokubukeka, ungalungisa konke: imilenze egcwele, isisu sokugwedla, amehlo amancane, isikhumba esilahlekile njalonjalo. Ngisho nezinwele ezingavamile ngokwemvelo kulula ukwenza i-chic futhi zinde, kwanele ukwakha izinsimbi zokufakelwa. Le nqubo ayishibhile. Umphumela ungabonwa izinyanga ezimbalwa. Futhi-ke kufanele uhlukane nama-curls okufakelwayo futhi ugcine isikhathi eside ukuphulukisa izinwele zakho. Ngakho-ke, ngeke sikhule lutho nanamuhla, kodwa sizozama ukuthola ukuqina kwezinwele ngokwemvelo usebenzisa amaskki ezenziwe izithako zemvelo. Lungiselela inhlanganisela enjalo kunoma yimuphi owesifazane ekhaya. Ngempela, konke okudingekayo kulokhu, ku-esiqandisini noma ekamelweni lokudla ngokudla. Nazi amasonto amahle kakhulu ngobuningi bezinwele, ahlolwe yizizukulwane ezingaphezu kwesisodwa sabesifazane.
Kunokuba ugeze ikhanda? Yiqiniso, iqanda!
Manje emashalofini ungathola ama-shampoos amaningi ahlukene wokugeza ikhanda lakho. Bonke, njengoba abakhiqizi bethembisa, bakhelwe ukuxazulula izinkinga zethu ngezinwele. Lokho kuyingozi nje ngezinwele zokusetshenziswa kwazo kuvame ukungezwa. Ukubonakala kwe-dandruff, ukuphuza izinwele kwanda , isikhumba se- scalp siba mnandi kakhulu, bese soma kakhulu. Kodwa ugogo-ugogo wethu wayengazi izinkinga ezinjalo. Ngaleso sikhathi kwakungekho ama-shampoos. Babevame ukugeza amakhanda abo okushiwo uMama Wendalo, njengamaqanda enkukhu. Kungasetshenziswa futhi njengesisindo sokubamba izinwele. Ekhaya, kulula ukukwenza. Ukwenza lokhu, shaya iqanda embozeni oqinile. Faka isicelo engxenyeni, ugibe esikhumbeni, bese ugeza izinwele ngamanzi ngaphandle kokusebenzisa i-shampoo. Ungangeza i-aloe, uju, i- burdock namafutha nezinye izithako kule maski. Kulesi simo, udinga ukubamba ekhanda lakho cishe imizuzu engama-20.
Isinkwa se-crumb - "isimangaliso" -mask
Enye iresiphi yokuvimbela ukulahleka kwezinwele, okuqinisekisiwe yisikhathi, i-gruel efudumele eyenziwe nge-rye isinkwa. Yilungiselele kalula: sibeka umquba esitsheni, siwugcwalise ngamanzi abilayo, usimboze ngesembozo futhi emva kwemizuzu engu-10 siyifaka ekhanda, sizama ukugubha isikhumba esikhunjeni. Lokhu kumaski omuhle kakhulu ngobuningi bezinwele. Ekhaya, kulula ukwenza. Emva kwakho konke, kukhona isinkwa njalo endlini yethu.
Kefir ekhanda lakhe? Yilokho!
Uthanda i-yogurt? Kuvela ukuthi ingasetshenziswa ngempumelelo ukuvimbela izinwele ukulahlekelwa futhi ukulahla dandruff. Umthamo we-Kefir - isiski esihle kakhulu sokubaluleka kwezinwele ekhaya. Senza ngale ndlela: uthele emgodini we-yogurt amafutha, uwushise emanzini okugeza kuze kube kancane. Bese ubeka imaski ngezinwele ezihlanzekile ezomile okwesikhashana sehora. Ekupheleni kwesikhathi, hlamba ikhanda ngamanzi afudumele.
Anyanisi kanye negalikhi bangabasizi abalungile ekulwa nokulahlekelwa izinwele
Cishe uke wabona ama-pharmacies shampoos kanye namaski nge-extracts anyanisi nogalikhi. Kuvela ukuthi lezi zitshalo ziyi-activators ezinhle kakhulu zokukhula kwezinwele. Emva kwakho konke, ukuze ama-curls abe mkhulu futhi aphilile, udinga "ukuvusa" ama-sleeping bul. Umnsalo negaliki ngalolu msebenzi omuhle kakhulu. Bathukuthelisa isikhumba. Ngenxa yalokho, ukujikeleza kwegazi ku-epidermis kuthuthukisa, izakhi zihanjiswa ngokugcwele emaqenjini "okulala". I-mask esebenzayo yobuningi bezinwele ezisekelwe kulezi zithako zilungiselelwa ngale ndlela elandelayo: gcoba u-anyanisi noma i-garlic, uwuthulule ku-grater emihle. Kwavela i-gruel. Siyigcoba ezimpandeni zezinwele. Okokuqala, kuzothatha kancane kancane, kodwa-ke kuyodlula. Sigcina imaski isigamu sehora, hlambulula ngamanzi afudumele kanye ne-shampoo.
Ngakho-ke, sithole ukuthi imaski engcono kakhulu yobuningi bezinwele ekhaya iyinhlanganisela yezithako zemvelo, elungiselelwe ngezandla zakho. Umphumela wokusebenzisa amathuluzi anjalo uzobonakala, mhlawumbe hhayi ngokushesha. Kodwa umphumela uzobe uphikelela kakhulu. Uphulukisa izinwele zakho, futhi zizokhula ziphilile futhi zinhle.
Simple e ukubulawa kwekhanda: namathe ngosizo bands zenjoloba
Izinto zokulungisa izinwele emakhanda, kagesi - okuyinto engcono, uzisebenzise kanjani?
Iringi: ezihlukahlukene ongakhetha design
Indlela qondanisa ithoni isikhumba? Izimfihlo ukwakheka nasici